Ụlọ ọrụ na -enye ọgwụ ịwa ahụ nwere ike ịdekọ Ndị na -emepụta ngwaahịa ịwa ahụ, China
72 Ọkpụkpụ Pimple patches-Func ...
Ihe enyemaka nke ịhụ nsọ nwanyị-Func ...
Ọrụ Ahụike Ọrịa shuga ...
Medical Jụrụ jel Patch-F ...
Ọkpụkpụ Pimple patches-Func ...
Nhazi usoro-obere setịpụrụ usoro
A na-eji Universal Sets maka nchebe otu oge n'oge ọrụ iji nye ihe mgbochi na nchekwa maka ọbara, mmiri ahụ na nzuzo nke ndị na-eche echiche nwere ike ibute ọrịa nke ndị ọrụ ụlọ ọgwụ na-ezute na ọrụ. Ọ bụ ngwọta na -agbanwe agbanwe nke enwere ike ijikọ ọnụ iji gboo ọtụtụ mkpa ịwa ahụ.
Univeral Set-Orthopedic Set
A na-eji usoro orthopedic Setịpụ maka nchedo otu oge n'oge ọrụ iji nye mgbochi na nchedo maka ọbara, mmụba ahụ na nzuzo nke ndị na-eche echiche nwere ike ibute ọrịa nke ndị ọrụ ahụike ụlọ ọgwụ na-ezute na ọrụ. Ọ bụ ngwọta na -agbanwe agbanwe nke enwere ike ijikọ ọnụ iji gboo ọtụtụ mkpa ịwa ahụ.
Na -agbaso ọkọlọtọ: EN13795
Urology na usoro ọmụmụ ụmụ nwanyị
Urology na gynecology setịpụrụ sterile bụ ngwaahịa a na-eji maka obere oge yana mejupụtara ngwaahịa dị iche iche dị ka akwa onye ọrịa, mkpuchi ngwa, idozi na ngwa nnakọta, ngwaahịa ngwaahịa (dịka akwa nhicha); agụnyere na ngwugwu na -adịghị ọcha. A na -ezube setịpụrụ usoro a na mpaghara ngwa/ọzụzụ dị iche iche. Ọ ga-egbochi ụzọ nje na-efe efe n'etiti mpaghara na-adịghị mma na ebe adịghị mma. Ihe nkiri polyethylene ma ọ bụ akwa dị iche iche nke ihe na-adịghị akwa mmiri nke ejiri ihe nkiri polyethylene kpuchie ọnụ na-arụkọ ọrụ ọnụ dị ka ihe mgbochi mmiri na nje ma belata nnyefe nke ụmụ nje. A na -etinye ngwaahịa ndị a n'elu ahịa adịghị mma ma dị na klaasị Ngwaọrụ Ahụike.